နှစ်ချို့ကော်ဖီ: November 2009
မစ္စတာချာချီ… ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာ ခင်ဗျား ဒေါင်းနင်းလမ်းကို ကျောခိုင်းသွာခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော် တို့ ခင်ဗျားကို မမေ့သေးဘူး.. ခင်ဗျားမပါပဲ ဖက်ဆစ်စနစ်တွေကို ကျွန်တော်တို့ တွန်းလှန်လို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ယုံကြည်ခဲ့တယ်… တိုင်းပြည်အတွက် အသက်သွေးချွှေးမျက်ရည်လုပ်အား ပြီးတော့ ကမ္ဘာကြီး အတွက်အမိုက်အမဲဆုံးစစ်ပွဲတစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ပေးခဲ့တယ်… မစ္စတာချာချီ… ခင်ဗျားက ကလေးဘ၀ကတည်းက ရဲတိုက်ပေါ်မှာကြီးပြင်းခဲ့တယ် ပြီးတော့ရေတပ်ဗိုလ်.. အင်္ဂလန်ကျွန်းပေါ်က အရှုံးနိမ့်ခံရဆုံး နိုင်ငံရေးသမား… ပါတီပြောင်းတယ် နောက်ပြီး ပါတီထပ်ပြောင်းတယ်… ခင်ဗျားယုံကြည်ချက် အမှန်တရား… ဥရောပရဲ့ လုံခြုံရေးကင်းမဲ့နေတဲ့ မိုက်မဲမှုကို ခင်ဗျား ကမ္ဘာစစ်မဖြစ်ခင်ကတည်းက မီးမောင်းထိုးပြတယ်.. နောက်ဆုံးတော့ လက်သီးဆုပ်စာ အင်္ဂလန်ကျွန်းလေးကိုကာကွယ်ဖို့ ကမ္ဘာကြီးကို ဖက်ဆစ် စစ်ဘီလူးတွေ ရန်ကကာကွယ်ဖို့ ခင်ဗျားဒေါင်းနင်းလန်းထဲ ၀င်ရောက်လာတယ် .. အသက်သွေးချွှေး လုပ်အားမျက်ရည်… တစ်စွန်းတစ်စမကျန်ခင်ဗျားပေးခဲ့တယ်.. ဘန်ကာထဲက ဆေးပြင်းလိပ်ကြီးခဲ့ရင်း နာဇီလေတပ်ကို ထွက်ထွက်ဆဲတတ်တယ်… ကမ္ဘာကြီးဟာ တစ်စည်းတစ်လုံးတည်းဖြစ်ရင်ကောင်းတယ် အဲဒီလိုဖြစ်လိုဖို့ အားလုံးပျက်စီးရမယ်ဆိုရင် တစ်ကွဲတစ်ပြားဆီဖြစ်နေရတာ ပိုကောင်းတယ်လို့ ခင်ဗျားပြောခဲ့တယ် ဥရောပ အတွက် လွတ်လပ်ရေးနဲ့ အချုပ်အချာအာဏာကို အတည်ပြုပေးခဲ့ပေမယ့်… အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီတွေအတွက်တော့ ခင်ဗျားက နတ်ဆိုးတစ်ပါးလိုပဲ… မြန်မာပြည်ကို လွတ်လပ်ရေးပေးဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့တယ် မြန်မာပြည်ကို လွတ်လပ်ရေးပေးလိုက်ရင် အဲဒီတိုင်းပြည်လေးမှာ သွေးချောင်းစီးကုန်လိမ့်မယ်လို့… အင်္ဂလိပ် ပါလီမန်မှာ ခင်ဗျားပြောခဲ့တယ်… အခုတော့ သမိုင်းက ခင်ဗျားအမြော်အမြင်တွေကို အတည်ပြုခဲ့ပြီးပြီ.. မစ္စတာချာချီ… မနက်ဖြန်မှာကျရောက်မယ့် ခင်ဗျား မွေးနေ့အတွက် ဒီကဗျာကို အမှတ်တရရေးတယ် ကမ္ဘာကြီးအတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှုအတွက် ကျေးဇူးပါ…။ မိုးလှိုင်ည Posted by
နံရံပေါ်က ဆေးသားအဟောင်းတွေ ကွာကျနေတယ်… တကယ်ဆို ကံကြမ္မာစာအိတ်ပေါ်မှာ ဘယ်လိပ်စာမှတပ်မထားဘူး… အမှန်မှာ မှားနေတယ်ဆိုတော့ … အမှားမှာ မှန်နေတတ်တယ်လို့ ဆိုချင်တာလည်း…. အဓိပါယ်ချည်းသက်သက်နဲ့တော့ ဘွဲ့ရလက်မှတ်တွေယူမနေချင် ဘယ်သူက ပြန်ထူးမှာလည်း … ကြိယာတွေကို ခေါ်နေတာလေ… ဘယ်ကမ်းခြေက တိုက်တဲ့ လေညှင်းလည်း ရိုက်ခတ်မိတော့ အေးစက်မာကျောလို့… ပြောကြည့်လေ.. သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ နှလုံးသားကို ရေခဲရိုက်… ဒါဟာပို့ကုန်အသစ်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့…. နံနက်ခင်းဆိုတာ လင်းပွင့်ဖို့ ကြိုးစားတိုင်း လောင်မြိုက် လမ်းပေါ်ကို နှင်ထုတ်လိုက်တဲ့ လောဘ က ဘာလည်း ဒီနေ့ အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ မိုးလင်းတိုင်းရမိတဲ့ နောင်တလို့ ဘာအတွက်လည်း ဘာကြောင့်လည်း အမှောင်မှာ မရေမရာ ထောင်ချောက်ကျနေတယ်… လူများ လမ်းမများ နံနက်ခင်းများ တဖြည်းဖြည်းေ၀၀ါးသွားတယ် နှစ်တွေလည်းကြာပြီ ငယ်ငယ် တစ်ခါတုန်းက ဆိုတာတွေ ရုန်းထွက်မရသေးပါလား… လျှာနှစ်ခွနဲ့ မြွေလို … အကြောင်းပြချက်နှစ်ခုနဲ့ လမ်းမ … ဆန့်ကျင်ဘက်တွေကို ဆက်သွယ်ထားနေတုန်း… ရုန်းထွက်ကြည့် ပြန်လည် နစ်မြုတ် … တဆစ်ဆစ်ဆွဲနှစ်နေတဲ့ နှစ်ကာလတွေထဲ… ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ မနက်ခင်းတွေ… ကမန်းကတမ်းဇာတ်သိမ်းလိုက်ရတယ်… မနက်ဖြန်အတွက် အာဂျင်ဒါ အသစ်တစ်စောင်ရေးဖို့…။ မိုးလှိုင်ည Posted by
မည်သူမဆိုအတွက်အများပိုင်နေရာလူတန်းစားမရွေးရောက်ရောက်လာတတ်ပေါ့တံခါးတွေမှာ အ၀င်အထွက်အမြဲရှိသလို ထောင်တွေမှာလည်း အ၀င်အထွက်ရှိတယ်ပြီးတော့ကံကြမ္မာရှိတယ် ရောဂါဘယရှိတယ်မိတ်ဆွေစစ်တွေရှိသလိုရန်သူစစ်စစ်တွေလည်းရှိတယ်မတရားမှုရှိသလို လက်စားချေမှုလည်းရှိတယ်ပညာရေးရှိသလို မိုက်မဲမှုလည်းရှိတယ်ဆေးရုံရှိသလို တရားရုံးလည်းထပ်ရှိတယ်ပညာရေးရှိသလို သေဒဏ်စီရင်ချက်လည်းရှိတယ်ဆင်းရဲသားတွေရှိသလို လူချမ်းသာလည်းရှိတယ်အရောင်းအ၀ယ်ရှိသလို ပြန်ပေးဆွဲမှုလည်းရှိတယ်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ထောင်ရှိသလို ထောင်ထဲမှာလည်း လူ့အဖွဲ့အစည်းရှိတယ်ဘာသာကြီးလေးမျိုးရှိသလို ဘာသာမဲ့တွေအတွက်ဘာကိုမှ မကိုးကွယ်ခွင့်လည်းရှိတယ်…အရက်စက်ဆုံး အကျဉ်းထောင်တွေဟာ မြိုတော်ဟောင်းကို လူတွေလာကြည့်သလိုမျိုးကမ္ဘာပေါ်မှာ နာမည်ကြီးပြတိုက်ကြီးတွေဖြစ်လာရဲ့သေခြင်းနဲ့ အကျဉ်းထောင်အတွက်…လူတော်များများက ပြင်ဆင်မှု မရှိခဲ့ကြဖူး…တကယ်တော့ ထောင်ဆိုတာ..လူတွေက လူတွေကို ထောင်ထောင်ဖမ်းတဲ့နေရာပေါ့…ထောင်တွေရှိနေတိုင်းသေချာတယ် တစ်နေရာရာမှာ မတရားမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာ….။မိုးလှိုင်ည
အတောင်ပံခတ်သံတွေနားစိုက်ထောင်တုန်းငါတို့တွေ မပျံသန်းလိုက်ရဘူး မဟုတ်လား..လေဟာ မုန်တိုင်းလို့ အသွေးအသားကိုဖြတ်တိုက်သွားတယ်ယုံကြည်ရဲစရာ မရှိပါဘူး… ဒါပေမယ့်တစ်ခုခုကိုယုံကြည်နေတုန်းအရာရာ ဝေသီတဲ့ လမ်းတွေနဲ့…ငါဘ၀ကို ဘယ်လို့ကွေ့ ရမလည်းအိပ်မက်က ဘရိတ်ပေါက်ပြီး ချောက်ထဲကျသွာပြီ…မနက်ဖြန်ဟာ နေ့ပြန်တိုးတွေရေတွက်နေတုန်းလားလက်ထဲက ငွေစက္ကူလို ငါတို့တွန့်ကြေနေရတာကိုကအရသာလား… အရှိန်တွေလွန်သွားပြီအချိန်တွေလွန်သွားပြီ…သွန်ပြစ်ရတော့မယ် ကော်ဖီအသိုးတွေလို့…လူ့ဘ၀ကို အသေအချာနေထိုင်မှုနဲ့အနည်ထိုင်သေချာမှုဟာ ငါတို့ခေတ်နဲ့မတော်ဘူးအင်္ကျီတစ်ယောက်ယောက်ခေါ်ရင် တစ်ယောက်ယောက်ပြန်မထူးနိုင်တဲ့…ဒီကနေ့ ဇာတ်လမ်းတင်ဆက်ပုံ …မနက်ဖြန်ကို မယုံဖူး မဟုတ်လား…။ မိုးလှိုင်ည
အက်စကိတ် တူ ရှပ်ဒေါင်း
ရင်ဘတ်ထဲမှာ တံတားတစ်စင်းရှိတယ် ဖြတ်သန်းခမကောက်ပါ…. ညီမလေးရယ်…. မင်းအကြည့်တွေအောက် ငါ့ကိုယ်ငါ Esc Esc Esc Esc Esc Esc Esc Esc Esc Esc ဘယ်နှကြိမ်မြောက်လည်း… အခါခါ မျက်ရည်မဲ့အလွမ်း အမှားအယွင်းတွေအတွက်အကြောင်းပြချက်တွေက လုံခြုံစေမှာလား… နောက်ဆုံးလုံးလုံးသုံးစားမရတာ ငါ/ Ego မရိုးဖြောင့်မှုအတွက် နောင်တတရားတွေ… လောကကြီးက တရားပါတယ်… ငါ့စိတ်က ငါ့အပေါ်မတရား…. မင်းကိုချစ်တယ်…. Shut down ဖြစ်သွားတဲ့ ဘ၀တစ်ခုဟာ ဒီကဗျာကို နောက်ဆုံးရေးခဲ့တယ်…. မိုးလှိုင်ည Posted by
ငါတို့ ရင်ထဲမှာလည်း အနုမြူဗုံးကျခဲ့တာပဲ…
ရွှေဝါရောင် စက်တင်ဘာကို ထားခဲ့
နိုဝင်ဘာ ၂ ဆိုပြီးဘာလို့ရေးဖြစ်တာလည်း…
အဲဒီကမ္ဘာ ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာ အသေအချာရှိခဲ့တယ်
မိုးလှိုင်ည Posted by
သေတယ်ဆိုတာ … ဘာလဲ..? မှောင်မိုက်သွားတာလား…. ခေါင်ခိုက်သွားတာလား…. တိတ်ဆိတ်သွားတာလား…. “စိတ်”တိတ်သွားတာလား… ခဏလေးပေမယ့်…. ကျော်ဖြတ်ရခက်ခဲတယ် ဒါနဲ့…. တကယ်မသိလို့ သေတယ်ဆိုတာ… ဘာလဲ..?
ယောက်ဖ မင်းဆုံးပြီဆိုတဲ့ တယ်လီဖုန်းကငါ့ကို တုန်လှုပ်သွားတယ်…ငါအိမ်ကိုခပ်မြန်မြန်ပြန်မရောက်နိုင်ဘူး…အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မင်းချစ်တဲ့မိစွာတေးကမျက်ရည်လည်ရွှဲနဲ့ မင်းသမီးလေး မေဂျင်က တောက်တီးတောက်တဲ့လျှောက်သွားနေတယ်..ငါ့မိဘတွေလည်း မျက်နှာမကောင်းဘူးမင်းမိဘတွေလည်း ကြေကွဲနေမှာ… မင်းဘာလို့ ခပ်လွယ်လွယ်သေပစ်တာလည်းကွာငါတို့က မင်းသမီးလေးမွေးနေ့အတွက်မင်းပြန်လာမယ်အောက်မေ့နေတာ…တစ်ခါတစ်ခါ မင်းငါ့ကိုပြောတတ်တယ်ဘုရားကျောင်းသွားပြီး ငယ်ငယ်ကလိုဂစ်တာတီးချင်တယ်လို့ ပြီတော့ မင်းငါ့ဆီအင်တာနက် လာသင်ဦးမယ်ဆို မင်း ငါ့အင်တာနက်ဆိုင်ကနေ မင်းညီမ ဆီဖုန်းမဆက်တော့ဘူးလားဒါပေမယ့် မင်းဘ၀ထဲမှာ ပြာယာခတ်နေတာပဲကွာသားကျွေးမှု မယားကျွေးမှု မိဘကျေးဇူးတွေကြားမှာမင်း အလုပ်ဇောတွေနဲ့…ဘုရားကျောင်းမှာ မင်းဂစ်တာ သွားပြန်မတီးဖြစ်ဘူးမင်းငါ့ဆီမှာ အင်တာနက် လာမသင်ဖြစ်ဘူး…နောက်ပြီး မင်းသမီးလေးမွေးနေ့ကိုလည်း မင်းမရောက်နိုင်ခဲ့ဘူးမင်းချစ်တဲ့လူတွေကိုထားပြီး အခုနိုဝင်ဘာမှာ ဘုရားသခင်ဆီကောက်ကာငင်ကာထွက်ခွာသွားပြီလား…ကိုစောဘရိုက်တာအသက် (၄၂)…ကောင်းကင်ဘုံမှာမင်းဝိဥာဉ်ငြိမ်းချမ်းအေးမြပါစေ…အာမင်…။အပ္ပမ္မာဒေန သမ္မာဒေထယောက်ဖရေ အမျှ အမျှ အမျှရောက်ရာဘုံဘ၀က သာဓုခေါ်ပါကွာ…။မိုးလှိုင်ည
အမြည်းရမယ်ဆိုရင်တောင်ဒါဟာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အနုပညာဝင်စို့ ထွက်စို့ လုပ်လို့မရပေမယ့်ဝင်သက်ထွက်သက်မှာအဖိုးအနဂ္ဂထိုက်အောင်မှတ်လို့ရတယ်အဖြစ်အပျက်မှာအဖြစ်ရှိအောင်နေထိုင်နည်းအတတ်သေတမ်းကစားနည်းမှာ ဗျူဟာရှိတယ်ကံစိတ်ဥတုအာဟာရပါတယ်ဓမ္မ၊ အဓမ္မပါတယ်ပေးလို့ရတယ် လှုလို့ရတယ်ယူလို့ရတယ် ကူလို့ရတယ်ပူလို့ရတယ် မူလို့ရတယ်ဘေးထိုင်လို့မရဘူး ဘုကျလို့မရဘူးမာန်ဝင့်လို့မရဘူး ကံမြှင့်လို့မရဘူးသေတမ်းကစားနည်းမှာ အားလုံးဟာလက်ရည်တူတစ်ဘ၀ယူမလား နှစ်ဘ၀ယူမလားခုနှစ်ဘ၀ယူမလား ဆယ်ဘ၀ယူမလားတစ်ကမ္ဘာယူမလား အသေင်္ချေယူမလားကိုယ့်ရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုယ်စိတ်ပါရင် အိပ်ချိန်မယူပဲလည်းကစားလို့ရတယ်သေတမ်းကစားနည်းအားလပ်ချိန်နဲ့ အချိန်ပိုမပေးဘူး…အသက်ရှိရင် မပါမဖြစ်…။မိုးလှိုင်ည
ကျွန်တော်ရဲ့ မအောင်မြင်မှုကို ဂုဏ်ယူပေးပါ… မေမေ
အမေ…အခု အောက်တိုဘာမှာ သားအိမ်ကိုပြန်လာတယ်…အရင်လို ညဉ့်နက်တတ်တုန်းပေါ့အမေ့ကသားကိုမျှော်မနေတော့ပါဘူး…။အမေ့ရင်ထဲမှာ သားတစ်ယောက်ဆုံးသွားပြီလို့အမေ သဘောထားတယ်…။နင်အခုထက်ထိ အလုပ်အကိုင်အတည်တကျမရှိသေးဘူး မဟုတ်လားလို့..အမေဆီးမေးတယ်…သုံးဆယ်နားကပ်တဲ့အသက်မှ မရှက် ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေဆီကချေးငှားစားသောက်နေတုန်းမဟုတ်လားနင့်အိပ်ကပ်ကြည့်လိုက်ရင် ဘယ်တော့မှပိုက်ဆံမရှိဘူးလူမိုက်နဲ့ငွေ အတူမနေဘူးဟဲ့…အခုထက်ထိစာယောင်ပေယောင်လူကတော့ မပြောင်ရောင်လို့နင်လမ်းသွားရင် လမ်းပေါ်ကခွေးတွေတောင်ထိုးထိုးဟောင်တယ်နင့်အစားငါရှက်တယ်နင့်ကိုမွေးထားတာငါမှားတယ်…အမေ့မြည်တမ်းမှုထဲကျွန်တော်ခေါင်းမဖော်ရဲခဲ့ပါဘူးအမေ..ဒါပေမယ့်အမေရယ်အမေထင်သလို ကျွန်တော်မမိုက်ပါဘူးအလုပ်နဲ့လက်လည်း တစ်စက်မှမပြတ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော် ပိုက်ဆံမမက်တာတစ်ခုပဲရှိတာအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ငွေကြေးအစေးမကပ်ဘူးအမေအခု ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာတာကျွန်တော့်ကဗျာတစ်ပုဒ်အတွက်ဥာဏ်ပူဇော်ခရတဲ့ငွေကြေးကိုအမေ့ကိုကန်တော့ဖို့ပါ…ပိုက်ဆံကနည်းနည်းလေးပါအမေနှစ်ထောင့်ငါးရာကျပ်တည်းဒါပေမယ့်အမေသန့်စင်မှုကတော့နက်ရှိုင်းလွန်းပါတယ်လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ မပါတဲ့ငွေကြေးပါ…။ကျွန်တော်ကဗျာတွေရေးလို့မဂ္ဂဇင်းမှာပါရင် စာမူခအနည်းအကျဉ်းရတတ်တယ်… အမေအဲဒါကို ကျွန်တော်ပျော်တယ်…အဲဒီစာမူခငွေနည်းနည်းလေးကတချို့အမေရိကန်သမ္မတတွေရဲ့လစာထက်ပိုမြင့်မြတ်တယ်အမေကျွန်တော်ရေးတဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ဟာအီရတ်ကိုစစ်မကြေငြာခဲ့ဘူး… အမေ…။ကျွန်တော်ကဗျာရေးတဲ့လက်ဟာသစ်ပင်ခုတ်ဖို့ရှက်တတ်ခဲ့တယ် အမေပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကဗျာဟာဖန်လုံအိမ်အာနိသင်လည်း မသက်ရောက်စေခဲ့ဘူး…အမေတစ်ခါတစ်လေတော့လည်းတစ်ကိုယ်တော်အနာဂါတ်ကိုကျွန်တော်တွေးမိတတ်ပါသေးတယ်မရေရာလှတဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကြောင့်ကျွန်တော့်ချစ်သူလည်း ကျွန်တော့်ကိုပစ်ပြေးဖူးတယ်…မတော်တဆ ထောင်တန်းကျခဲ့ရင်တောင်ထောင်ဝင်စာရဖို့ မိသားစုမရှိတဲ့ကောင်ပါသေကောင်ပေါင်းလဲ ဝေဒနာဖိစီးခဲ့ရင်လည်းအများပြည်သူဆေးရုံကုတင်တစ်လုံးပေါ်မှာအေးစက်နာကျင်စွာသေဆုံးရမယ့် ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းကောင်အဲဒီလို ကျွန်တေ်ာ့ကိုယ် ကျွန်တော်စိတ်ပူမိသေးတယ်…အမေ။ဒါပေမယ့် အမေကျွန်တော်ချစ်မက်တဲ့ ကမ္ဘာက ကျွန်တော်ထက်ပိုပြီး ပူပြင်းလောင်မြိုက်နေတယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ လူအဖွဲ့အစည်းကကျွန်တော်ထက်ပိုကြီးတဲ့ပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်…ကျွန်တော်တို့မှာ ဘယ်လိုမှထွန်ယက်စိုက်ပျိုးလို့မရတဲ့ အာဖရိကတိုက်ကြီးနဲ့ဆင်းရဲတွင်းထဲက လူသန်းရာနဲ့ချီကိုဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေရတယ်…မွေးကတည်းကသေဒဏ်ကျနေတဲ့HIVကူးစက်ခံကလေးငယ်တွေအရှေ့အာရှက လူကုန်ကူးခံရသူတွေအကြောင်းလုပ်အားနဲ့ ငွေကြေးကို ဂုတ်သွေးစုပ်ခံနေရတဲ့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအရေး…လူ့အဖွဲ့အစည်းက လူ့အဖွဲ့စည်းကိုမောင်းထုတ်သလိုလူမျိုးစု ပဋိပက္ခတွေကြောင့်နိုင်ငံမဲ့နေရတဲ့အင်းအားနည်း လူမျိုးစုငယ်တွေရဲ့အရေး…ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ မျှဝေနေထိုင်တဲ့အချိန်ခဏလေးပါ..အဲဒီအတွေးတွေကြောင့် ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်စိတ်ပူလို့မရသေးဘူးအမေ….ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လူအတော်များများဟာငွေကြေး၊ အာဏာ၊ အခွင့်အရေးဆိုရင်ဘယ်သူမဆိုအရယူဖို့ဝန်မလေးကြဘူးအမေ…ဒါပေမယ့် တာဝန်ယူကြမလားဆိုရင်တော့ဒါကျူပ်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးကျူပ်တို့မှမတတ်နိုင်တာဆိုတဲ့စကားနဲ့ခေါင်းရှောင်တတ်ကြတယ်… အမေလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအတွက် တာဝန်ယူရဲတဲံ လူနည်းနည်းလေးကပဲအလုပ်တွေ သိမ်းကျူံးလုပ်နေကြတာပါ … အမေအဲဒီလို စကားကြီးကျယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တွေးခေါ်နေထိုင်တာပါ.. အမေတကယ်တော့ ဘ၀မှာ ဂုဏ်ဓန၊ ငွေကြေးအခွင့်အာဏာ ဆိုတာ ရေပွက်ပမာပါငယ်စဉ်ကတည်းက သူဠေးသားအင်္ဂလန်က ၀တ်လုံတော်ရနောက်တော့ နံငယ်ပိုင်းလေးနဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် ကိုယ်တိုင်ဆားချက်တဲ့မဟတ္တမဂန္ဒီကြီးကို ကျွန်တော်သိပ်ကြည်ညိုတာပဲအမေ…ကျွန်တော်သူတို့တွေ လျှောက်သွားခဲ့တဲ့သန့်စင်သောလမ်းကို လျှောက်လှမ်းနေတာနောက်ကလူတွေလည်း လိုက်လာကြလိမ့်မယ်လတ်တလောတော့ အဖော်ပါချင်မှပါမှာပေါ့…ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်နောက်မရွံ့ပါဘူး…အခုခေတ် ကမ္ဘာကြီးမှာပညာတတ်ယောင်ယောင်တွေကကိုယ်ကျိုးစီးပွား ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတင်းကာရောစွတ်အော်နေကြတယ်အမေအဲဒီကိုယ်ကျိုးစီးပွားကြောင့်အားလုံးပျက်စီးကိန်းဆိုက်မှာတချို့က ကမ္ဘာကြီးကို အမွေရသလိုသိမ်းပိုက်ဖို့ လူဖြစ်လာတာတချို့က ကမ္ဘာကြီးကို အလုပ်အကျွေးပြုဖို့ လူဖြစ်လာတာကျွန်တော်ကတော့ ဒုတိယလူစားပဲ ဖြစ်ချင်တယ်အမေ…။အဲဒီအတွက်တစ်ကိုယ်ရည်ဘ၀က မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး…ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ရဲ့မအောင်မြင်မှုကိုပဲ ဂုဏ်ယူပေးပါ… မေမေ။မိုးလှိုင်ည